Umyalezo obheke kwiMeya entsha ye-Ethekwini – Bayede News
Kujabulisile ukuthi ekugcineni udaba lwalowo ozohola
Posted on 13/09/2019 19/09/2019 by Bayede-News
UMnu uMxolisi Kaunda efungiswa kwesobumeya Isithombe: Arrive Alive
Kujabulisile ukuthi ekugcineni udaba lwalowo ozohola uMkhandlu weTheku njengemeya lufinyelele ekugcineni ngokubekwa kukaMhlonishwa uMxolisi Kaunda ethatha indawo kaMhlonishwa uZandile Gumede.
Njengesakhamuzi esakhele uMasipala iTheku ngibona kungaba yinto enhle ukuqwashisa imeya engenayo ngalokho labo abahlala emalokishini azungeze iTheku okungabaphathi kahle nokungakuhle kugwenywe wubuholi obusha. Ngithi abahlala emalokishini ngoba abahlala ezindaweni okwakungezabamhlophe ngokomlando babukeka bengenayo inkinga abasemalokishini ababhekene nayo. Uma ukhuluma ngezindawo ezifana noKloof, oDurban North no-Amanzimtoti kuhlala kuluhlaza ungathi eyakhona imvula ina ubusika nehlobo.
Isibonelo wumehluko ongalinganiseki wokungcola okhona phakathi koMkhumbane neBonnela uma usuka eChesterville. Kuba sengathi umuntu usuke komunye umhlaba wangena komunye. Lokhu kungaqhathaniseki kwamazinga kubonakala ngisho emadolobheni lapho kuvame abamhlophe khona njengakoMusgrave noma usenkabeni yeTheku. Phakathi neTheku kungcole kuyaxathuka besekuthi ezindaweni okuvame ukuhamba kuzo abamhlophe kuhlanzeke ngendlela emangalisayo. Inselelo uMnu uKaunda abhekene nayo eyokwenza izindawo ezingaphansi kweTheku zikhombise ukuthi ziphethwe endaweni eyodwa. Kungabi yimihlaba ekhomba ukwehlukana ngokobuhlanga. Kungumsebenzi wakhe ukwenza isiqiniseko sokuhlanzeka kwezindawo zonke ezingaphansi kwalo Masipala nokwenza isiqiniseko sokuthi imithetho kaMasipala iyahlonishwa ngokuthi abayephulayo bathathelwe izinyathelo zomthetho.
Akungakhulumi imigodi esemgwaqweni ukuthi umuntu usengena elokishini. Ukulungisa izimoto ezilinyazwa ngamapot holes athatha iminyaka engalungiswa kubiza enkulu imali kube kwaziwa ukuthi emalokishini kuhlala abantu abathwele kanzima empilweni. Imigwaqo ayilungiswe ngokushesha kungakadaleki umonakalo omkhulu. Kunanethemba lokuthi amaphoyisa kaMasipala azowenza umsebenzi wawo ajezise ngokungesabi abantu abashayela ngobudedengu obushiya izinkubela ezigcina zinganakwe muntu ezingeni likaHulumeni zigcine ziyimithwalo yemindeni ehluphekayo.
Kunethemba lokuthi ngokungena kwakhe amathenda awasezokuba wukudla kweziqhwaga nokuyinto egcina ilimaze izakhamizi ngokuthi okuyizidingo kuzo kuthathe isikhathi ukulungiseka. Kuyethembisa ukuthi ukungena kukaKaunda kuzosiza umhlali waselokishini onenkinga yezinto ezephulwa ngamabomu ukuze kuvuleke amathenda aphindaphinda into eyodwa. Uzolwisana nokuphazanyiswa ngamabomu kukagesi ukuze abathile babhale isikhathi esengeziwe nesizobakhokhela kuthi xaxa ngezinkinga ezidalwa ngesimabomu egameni lemali.
Kunabantu asebeze bethiwa igama lamaphara abahlukumeza imiphakathi ngonoqhakala bengaboshwa. Ngaphandle kokubamba inkunzi ngesihluku bayinkinga ngezindlela ezehlukene. Emalokishini bantshontsha kwani emizini yabantu, batholakale emigwaqweni bevala ngenhlabathi imisele eshiywa ngamabomu yizisebenzi zikaMasipala ikhamisile emva kokufakwa kwamapayipi namakhebula. Laba abangamaphara abazinika umsebenzi wokuvala imisele bengagunyaziwe basuke belindele ukuphonselwa okuthile ukuze bayothenga lokhu abakubhemayo. Umninimoto uyawukhokhela njalo lowo mgwaqo ngokuthelela imoto yakhe kodwa njalo ulindeleke ukuthi akhokhele lo msebenzi ongagunyaziwe owenziwa yilawa maphara.
Maphakathi neTheku konakele kakhulu. Izimoto zabantu zicwiywa isidana amaphoyisa kaMasipala nalawo kaHulumeni omkhulu engabonwa nangokhalo. Kunethemba lokuthi uKaunda nethimba lakhe bazokuguqula lokhu ngokwenza isiqinisekiso sokusebenza komthetho. Ayizwakali indaba yokuthi kunezindawo ngaphansi kweTheku esezigunywe ngabokufika. Izakhamuzi zasemalokishini azinayo imali yokuqombola ziye kozijabulisa koDrakensberg kodwa iTheku liphethe yonke injabulo yazo. Uma zingasakwazi ukufinyelela ePhoyinti ngoba kuthiwa sekuseNigeria ngakho akungeneki lokho kuchaza inkinga enkulu edinga ukulungiswa.
UMhlonishwa uHerman Mashaba weDemocratic Alliance noma kunzima ubonakala ezama ukwenza imizamo yokulungisa isimo esonakalela ezandleni zabamandulelayo eMkhandlwini kaMasipala iGoli. Kwethenjwa okufanayo kuKaunda ne-Ethekwini.
Izakhamuzi zasemalokishini zingafisa ukuzibona ziyingxenye ephelele yezinkundla zamawadi lapho kuthathwa khona izinqumo ngentuthuko nomnotho othinta imiphakathi. Kanjalo nakumawar rooms. Imisebenzi emikhulu ezothinta impilo yabantu abasemalokishini kuxoxwa ngayo abantu beshiywe ngaphandle.
Isize yaphuma iMeya ekade iphethe, indaba ye“Go!Durban” iyindlabusululu phakathi kwezikhulu zikaMasipala, abathole ithenda kanye nemboni yamatekisi. Sebeluxoxe udaba lwaze lwabaxabanisa kodwa awuzwa ukuthi umuntu phaqa waselokishini okunguyena okulindeleke alweseke lolu hlelo uyongena uma sekwenzenjani. Namanje laphaya eNtshongweni kuthiwa kuza intuthuko enkulu nabakwaHullet ezoguqula impilo yabantu bakwaNdengezi naseNtshongweni. Abantu ngabe batsheliwe yini ngamathuba omnotho alethwa yile misebenzi emikhulu ezoguqula impilo yabo nokuthi bona kufanele bazilungiselele kanjani?
Ukuphatha kukaHulumeni kuncike ekuhlanganyeleni kwezinhlaka zonke kudemokhrasi; ekusatshalalisweni kolwazi nasekuphatheni ngendlela enobulungiswa, evulekile necabangela zonke izakhamizi zezwe. Kungakuhle uMhlonishwa uKaunda naphathiswe nabo ngokwethenjwa bakuqwashele lokhu. Baze bangakhohlwa nawukubhekana ngqo nendaba yomhlaba. Abantu basemalokishini banenkinga yendawo yokungcwaba.
Ekugcineni kunethemba lokuthi uMhlonishwa uKaunda uzokwenza izinto ngendlela eyehlukile kunaleyo ebiseyejwayelekile ekuphatheni kwabangaphambi kwakhe. Kunamazwi akhulunywa ngowayenguMengameli wezwe uThabo Mbeki athi iNingizimu Afrika ingamazwe amabili emhlabeni owodwa. Wathi kukhona izwe labacebile nalelo labadla imbuya ngothi. Lokho kubonakele emkhandlwini ophumayo nangendlela abantu abasemalokishini abaphathwe ngayo. Kunethemba lokuthi uMhlonishwa uKaunda nethimba lakhe bazokuphikisa lokhu.
Posted in Inkundla Yabantu, Izindaba